LAYAAB:Gabadh 32 sano jirta oo ku dhawaad 20 sano timaheeda dhaqani. – The Voice of Northeastern Kenya
LAYAAB:Gabadh 32 sano jirta oo ku dhawaad 20 sano timaheeda dhaqani.
Star FM November 9, 2018
Gabadhan oo lagu magacaabo Frankie Cluney oo qabta tima u garayaa lugaha ayaa sharaxday sababta aysan timaha madaxeeda u dhaqan mudda 20 sano.
Frankie Cluney, oo da’deeda lagu sheegay 32, kana soo jeeda Magaalada Brighton ee wadanka ingrisska ayaa sheegtay inay joojisay dhaqida timaheeda markii ay jirtay da’ada 13 jir madama ay nacday dhaqid timaha, iyadoo timaheedana aan la jarin da’ada 18 sano ilaa iminka.
Waxa ay ku adkeysatay timaha oo la daysado inay tahay dayactir aad u hooseeyo, ayna u baahantahay kaliya in la hagaajiyo, inkastoo ay qaadani wax ka yar nus sac.
Frankie oo hada ah farshaxan ayaa sharaxady sida ay u go’aansatay inay timaha u baxaan marka ay jirtay da’ada lix sano, kadib markii ay jaceyl u qaaday sawiraanta haweeney ay ku aragtay boog farshaxan ah.
Sidoo kale waxay sheegtay inay u go’aansatay hoyadeed oo laheyd boog quruxsan oo farshaxan ah, iyaduna ay si aad ah u jacleyd inay sawirto sawiraanta boogga farshaxanka ku sawiran oo kale.
Frankie ayaa sidoo kale sharaxday sida ay u joojisay dhaqida timaheeda gabi ahaan caruurnimadeedi kadib markii saaxibada hooyadeed u soo jeedisay arrintaas.
‘Markii aan jiray 13 sano tamaheygu cadiyaan aad ayay u dherayeen, si aad ahna wey u cuslayeen,saa’idna wey u dhuubnayeen mana jecleysan dhaqistooda waa ay adkeed in la helo wixi lagu dhaqi lahaay sidaasi darted waxaan go’aansaday inaan sidaasi ku wato.
Frankie timaheeda saa’id ayay u dhadheeryihiin, inay timaheeda kala fidiso ayaa waxay u isticmasha cirbad sidoo kalena ay dabarkeeda ku fidiso.
Sikistaba , waxa ay sheegtay inaysan wakhti badan ku qaadanin fiirinta timaheeda.
Waa run inay u xunyihiin dhanka nadhaafada. Dadku waxay u maleyaan inay mudda badan qaadani, balse madaama aan u isticmaalin wax nafaqa ah, waxa kaliya aan ku sameeyo ayaa ah inaan kala filaariyo taasina maalin walba ayaan u sameeyaa.
Waxa ay sheegtay inaad ogaaneyso halkii aad horey u joogtay iyo halka aad iminka joogto.
Mahan kaliya Frankie inay u rumoowday riyadeedii aheyd inay hesho tima dhaadheer, balse timaheeda dhadheer ayaa qeyb ka ah shaqadeeda noolasha.
Waxay intaa ku dartay in timaha dhadheer aad mararka qaar u isticmaali karto dharahaan.
Frankie ayaa sidoo kale soo xasuusatay maqas ay is ku goysay iyadoo ku ciyaaraysa markii ay yareed.
Waxaa ay sheegtay in markii ay yareed ay hooyadeed u diidi jirtay inay timaha daysato.
Balse iyadu waxay ay sheegtay in ay u ogoshahay gabdhaheeda inay timaha daystaan oo sida ay rabaan u hagajistaan.
Waxaa Qoray: Anwar Mohamed
← DHAGEYSO Dowlada ismaamulka mandera oo samaysay howlgal lagu banaynaayo wadooyinka qaar oo ay dad khaas ah xirteen
Madaxweynaha dalka oo difaacay daynta dowlada →